» पशुपतिको मूल ढुकुटीमा के छ भन्दै ढुकुटी नखोल्ने कारण खोज्दै सांसदहरु
पशुपतिको मूल ढुकुटीमा के छ भन्दै ढुकुटी नखोल्ने कारण खोज्दै सांसदहरु
६ असार २०७६, शुक्रबार ०७:२३ प्रकाशित
काठमाडौं,असार ६- ‘पशुपतिको मूल ढुकुटी खोल्नुपर्‍यो। यसलाई बन्द गरी राख्नुभएन’, सांसद खिमलाल भट्टराईले भने, ‘यसभित्र के छ ? भएको सम्पत्ति सबै खरानी भयो कि बाँकी छ ? हेरांै त ।’
अन्य सांसदले पनि पशुपतिनाथ मन्दिरको ढुकुटीमा भएको सम्पत्तिमा चासो राखे । उनीहरूले ढुकुटी खोलेर त्यसको अवस्थाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले ढुकुटीको अवस्था के छ भनी प्रश्न गरेका थिए । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।